Mirgi Abbaa-biyyummaa Bilisummaa Dhugaa Qofaan Nuuf Kabajama ! (Ibsa ABO - Bitootessa 07, 2019) Qabsoon Bilisummaa fi mirga Abbaa-biyyummaa Sabni Oromoo barootaa dheeraaf gaggeessee fi wareegamni ulfaataan...
OPDO Sobaan Gammada jetti. Raya Abadura Abagaro itti himi. ﻿ Magaaloota Oromiyaa guyyaa har'aa Mar 7, 2019 Hiriira Mormii gaggeessaa oolan keessaa: 1) Awwadaay 2) Adaamaa 3) Asallaa 4) Adaabbaa 5)...
Rakkinaa fi Salphina Abbaan Filate! Damee Boruutin, Bitootessa 7, 2019 Yaa Uummata Oromoo jala muree waliif haa himnu. Kan rakkinaa fi salphina bara baraa keessa jiraachuu...
OPDOn waadaa uummata Oromoo nyaattee jirti Taakkalaa Uumaa dhimma kondimineemii lafa Oromoo irratti ijaarrame dabarsanii naafxanyootaf qooduu kan murteesse kophaa isaa osoon taane #MMDrAbiyyiiAhmadii fi hooggantoonni OPDO...
Lafti Teenya Lafee Teenya - Hiriira mormi - Oromiyaa Guututi Guyyaa Hardhaa ta'aa jira
Ijoolee garaa nama raaftu kana mee dhageeffadhaa fi Waamicha Qeerroo Amboo #Waamicha_Qeerroo_Amboo irraa ============================ Qeerroo fi Qarree Guutuu oromiyaa hundaaf ፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡፡ #SharegodhaaWaliifdabarsaa Dhiigni ilmaan oromoo 5000 ol sababa master plan tiif...